Hamilton Masakadza Archives – Page 2 of 3 – Nehanda Radio
Nov 24, 2018 9,023
Zimbabwe captain Hamilton Masakadza believes a glimmer of hope is shining through the ageing national cricket team’s dressing room.
Oct 23, 2018 9,344
Oct 17, 2018 9,283
Oct 2, 2018 15,116
Zimbabwe captain Hamilton Masakadza says he and his team were surprised at how the pitch played in Kimberley after suffering a five-wicket defeat against the Proteas in the first match of the ODI cricket series on Sunday.
Jul 24, 2018 10,727
Former Zimbabwe U19 coach Stephen Mangongo, pictured below, believes the Zimbabwe Cricket (ZC) board is “crazy” in the aftermath of the 5-0 ODI series whitewash against Pakistan in Bulawayo. Zimbabwe were so poor during the series as they…
Jul 1, 2018 768
Apr 6, 2018 502
Aug 2, 2017 7,429
At 33, cricketer star Hamilton Masakadza is proud that half of his lifetime has been spent on the field, let alone that he still serves the Zimbabwe senior men national team with impunity.
Feb 16, 2017 271
Zimbabwe cricket team coach Heath Streak says he has a comprehensive game plan in place to deal with Afghanistan as the Chevrons seek to put the Associate member in their right place when they clash in a five-match One Day International…
Zimbabwe axe coach, captain before India series
Jun 1, 2016 252
Jun 30, 2022 20,896